မိုးစက်ပွင့်: တခုသော ဆဲမ်မီနာ
ဂျိုးဇက် စတပ်ဂလစ် အတော်နာမည်ကြီးတယ်ဗျ။ သူ့ဆောင်းပါးတွေ တိုင်းမ် နဲ့ နယူးစ်ဝိခ်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဖြန့်ဝေတဲ့ စာရွက် စာတမ်းတွေကို တင်ပေးရင် ကောင်းမှာပဲဗျာ။
et 16 February 2012 at 20:35
Thanks for sharing. I feel like I am attending the seminar by myself.
Anonymous 17 February 2012 at 09:42
i feel as if i were attending that seminar in person.
wishing you maybthe one who always serves for the welfare of people:)
Shwe Sin 21 February 2012 at 13:14
ကျေးဇူးအမရေ... မသွားဖြစ်လို့. စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ.. အမရဲ့ အချုပ်လေးကိုဘဲ စိတ်အေးလက်အေးဖတ်လိုက်ပါတယ်. . . Share လိုက်ပီနော်
မြသွေးနီ 27 February 2012 at 15:02